Isihlungi semidiya - iSffiltech
Umsebenzi Wokunakekela Nokwesekwa
Umshayeli nesofthiwe & Ukusekelwa kwencwadi yomsebenzisi
Ikhaya » Imikhiqizo » Isihlungi sokudonsa » Hlunga Imidiya
Incazelo:Indwangu yokuhlunga yeglasi yenziwa ngentambo ye-fiberglass, ngokuphathwa okukhethekile njenge-graphite, i-silicon, ukucwilisa kwe-ptfe, ngokumelene nokwelashwa kwe-acid nokunye ukwelashwa ngamakhemikhali. iyindwangu yokuhlunga ephezulu yokushisa ephakeme izikhwama zokuhlunga ze-fiberglass zisetshenziswa kabanzi endaweni enezinto zokuhlanza uthuli lwezimboni, indlu yesikhwama, ukungcoliswa komoya kanye nokuvuselelwa kabusha kothuli okubalulekile, njll.
Indwangu yokuhlunga ye-FMS
Incazelo:1. Ukushisa kokusebenza kwe-150 Deg c,
2. ukuhlinzwa okukhulu max yi-150 deg c.
3. I-anti-acid enhle, anti-alkali omuhle, ukuzinza okuhle kwe-hydrolysis
4. Kusho Ukuvunyelwa Komoya: 10-15 m3/m2/min@12.7mmH2O
5. Yimithombo yemidiya eshibhile kakhulu kunkambu yokuhlunga yesikhwama. Isihlungi sesikhwama sePolyester siyizinto ezaziwa kakhulu ohlelweni lwezindlu zesikhwama.
Indwangu yokuhlunga ye-PTFE
Incazelo:Inaliti ye-PTFE yazizwa ibizwa nangokuthi iTeflon, ukusebenza kahle emazingeni okushisa angama-260 centigrade, izinga lokushisa lakhona lingafika ku-280 centigrade. Isihlungi se-PTFE sizwe siyinto ekhethekile ene-alkali ne-acid ukumelana, i-anti-hydrolysis, ubukhulu obuzinzile, ngakho-ke isikhwama sokuhlunga se-ptfe sisetshenziselwa kakhulu ukubhema kwamalahle okushisa, ukuqothula imfucuza, ukukhiqizwa kwekhabhoni emnyama, i-Tio2 ikhiqiza ukwelashwa okugcotshwayo noma ukuqoqwa kothuli. , kanye nokushisa okuphezulu noma ukuhlunga okuthile okulimazayo koketshezi.
Indwangu yokuhlunga ye-P84
Ukushisa okuphezulu okushisa
Ukushisa okusebenzayo: 240 degree
Ukushisa okuphezulu: degrees ezingama-260
Akukho phuzu lokuncibilika, umbala ophuzi
I-P84 fiber inesakhiwo sesiphambano (ukwakheka kwamaqabunga), inendawo enkulu yokufayinda kanye nokusebenza okuhle kakhulu kokufayilisha.
I-500gsm P84 yenaliti eshayiwe yazizwa imanzi + namanzi & amp;
Indwangu yokuhlunga ye-Aramid
Incazelo:Ubukhulu: ububanzi 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm ect.
Noma ibuphi ubude buyatholakala. Usayizi okhethekile uyenzeka ngezifiso.
Indwangu yokuhlunga ye-Pps
Noma ibuphi ubude buyatholakala. Usayizi okhethekile wenziwe ngendlela oyifisayo.
Indwangu yokuhlunga ye-Acrylic
Incazelo:Aconic inaliti wazizwa uthuli isikhwama amakhemikhali igama polyacrylonitrile, ulisebenzise njengoba impahla eluhlaza ngenaliti wazizwa uhlelo lwezomthetho, bese ngokusebenzisa ekhethekile amanzi processing acrylic okuphakathi okuphakathi kutholakala hydrolysis ukumelana inaliti wazizwa. Ukuphefumula okungu-14 m3 / m2, inani lamaminithi, izinga lokushisa lokusebenza ngaso leso sikhathi: 160 ℃, 140 ℃ umsebenzi ojwayelekile. Kudingeka uzizwe kumshini we-acrylic uluka njengoba indwangu eyisisekelo iqinisa amandla aqonde phezulu naphezulu.
Indwangu yokuhlunga ye-PP
Incazelo:Isikhwama sokuhlunga se-polyester senziwe ngo-100% wefilitha yephayiphu ye-polyester, ngemuva kwenaliti eshayiwe, ukushisa okuhlanganisiwe okufakwayo okusetshenziselwa ukuthungwa kwesihlungi se-polyester, lapho-ke umuzwa we-polyester uzizwe ungathunyelwa kwizikhwama zokuhlunga ze-polyester.
Indwangu yokuhlunga ye-Pe
Incazelo:I-polyester fiber edingekayo izwa ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile alisetshenziswa njengenqubo eyakhiwe ngenaliti isebenzisa i-fiber staggered, isikhala sokusabalalisa umfaniswano ngendwangu enhle yefreyimu, isikhunta esisetshenziswa nge-polyester ne-polyester twint eyenziwe ngendwangu ngenaliti ezizwa isishisa, i-singeing, noma i-coating ngaphezulu, njengokuthunyelwa- ukucubungula, kwenze ukuthi ingaphezulu le-level yakhe ibushelelezi, akukho lula ukuthi kungavinjelwa uthuli, i-porility impahla esetshenziswayo, ukutholakala okuhle kulungile, sebenzisa kakhulu, ukumelana okuqinile kokuqina kwamakhemikhali, hhayi kuphela ukuhlunga igesi lokushisa kwekamelo, kanye nokuhlunga nge-acid negesi ye-alkali ewonakalisayo, futhi ingahlunga, isihlungi se-oyela, amanzi yisimo sokushisa esijwayelekile, ukwahlukanisa okuqinile koketshezi ezindaweni ezifana nezinto ezifanele zokuhlunga.
Ikhaya Previous 1 Olandelayo Last - Total 9 1 uloba page yamanje / obuphelele 1 20 ngekhasi ngalinye
Indwangu Yemaski Yobuso
Izindlu Zokuhlunga Ezizenzakalelayo Zokuzenzela
Izindlu Zokuhlunga Izikhwama Eziningi
Izihlungi ze-Biostatic Treated
Isihlungi sangaphambi kokuhlungwa komoya
Isihlungi se-Bag kanye nezihlungi ze-Compact
EPA HEPA Nezihlungi ze-ULPA
Isihlungi Sesicelo Esikhethekile
Umshini Wokuhlunga Ozenzakalelayo
Umshini wokuthunga we-Semi Auto Filter Tube
Umshini we-Flter Bag Tube Welding
Umshini Okulambisa Indwangu yokuhlunga
Umshini Omfushane Wokuthunga Ingalo
Umshini Wokuthungatha Omude
Umshini Oshisa Kakhulu
Umshini Wokuhlunga Okuzenzakalelayo we-othomathikhi
Umshini Wokuhlunga we-V isitayela se-Liquid engezansi
Isihlungi Somshini Weglue Yeglue Ye-Filter Bag Azikho I-Thread Hole
Isihlungi Sesihlungi seBhendi Sokwenza Umshini
Ucingo: 0086 21 54715167 /
Ifeksi: 021 33321505
Ikheli: Igumbi NO.5004, North-Bullying, New Cangyuan Tech Building, NO.951 Jianchuan Road, Minhang Disctrict, Shanghai China